News – Maythadin
May Thadin | January 19, 2022
Unicode စစ်ကောင်စီလက်ထက် ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် Live လွှင့်ကာကြော်ငြာလာတဲ့ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ရန်ကုန် သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင်းက ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ယမန်နေ့ညက ဖေ့စ်ဘုတ်တွင် Live လွှင့်ကာ ကြေညာမှုပြုနေခဲ့ပြီး ၎င်းတို့လုပ်ငန်းသည် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကာလအတွင်း ဖမ်းဆီးမှုများမဖြစ်အောင်စီမံထားနိုင်ခဲ့သည်ဟုပါ အဆိုပါလုပ်ငန်း၏မန်နေဂျာဆိုသူက ပြောသွားခဲ့သည်။ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ၁၆/၂ ရပ်ကွက်တွင်တည်ရှိသော Rainblow Myanmar သည်အနှိပ်ခန်းဟုဗန်းပြကာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေ ရရှိနိုင်ကြောင်း
May Thadin | January 17, 2022
Unicode မိန်းမအပေါ် သစ္စာမဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးနှိပ်စက်တဲ့အပြင် မိန်းမရဲ့ ကုမ္ပဏီကငွေ သိန်း၂၀၀၀ကျော် ခိုးပြေးတဲ့ယောက်ကျား ကျွန်မ ကုမ္မဏီမှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ ကျွန်မ၏ခင်ပွန်း အောက်ပါ ဓာတ်ပုံရှင်ကိုစိုင်း (ခေါ်)ကိုဇော်မွန်သည် ကျွန်မတည်ထောင်ထားသော Myanmar Tracery Gold Mining Coအား ကလောတွင် ကိုဗစ်ကာလကျွန်မလာရောက်ရန် အခက်အခဲရှိနေသည့်ကာလအတွင်း အခွင့်ကောင်းယူပြီးကိုယ်ခြင်းစာတရားမရှိ ဝန်ထမ်းလစာများအား (၄လ)မရှင်းခြင်း ၁၄၅သိန်းဆီဖိုးငွေ ၄၇၅သိန်း
အဖိုးတို့ …သူများတွေဆီ တောင်းစားနေရတာ တပါတ်ကျော်ပြီ ပန်းဆိုးတန်း City Express ဘေးမှာ ခေါင်းစည်းကြိုး ကလစ်တွေ ရောင်းတယ်
Unicode အဖိုးတို့ …သူများတွေဆီ တောင်းစားနေရတာ တပါတ်ကျော်ပြီ အဖိုး အသက် (၇၀)ကျော် အဖွား နှင့် မြေး (၃)ယောက်ဖြင့်နေတယ် ပန်းဆိုးတန်း City Express ဘေးမှာ ခေါင်းစည်းကြိုး ကလစ်တွေ ရောင်းတယ် အဖိုးရေ ခေါင်းစည်းကြိုးတွေ ဘယ်လိုရောင်း ??သားရေ အဖိုးပြမယ်နော် အိတ်နဲ့က တခု – 1,000
ထိုင်း နိုင်ငံမှာ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ရရှာတဲ့ မြန်မာ ဇနီးမောင်နှံ
May Thadin | January 15, 2022
Unicode ထိုင်းနိုင်ငံ ဆူလပ်မြို့နယ် ဒူးရမ်းသီးခြံလုပ်သားဇနီးမောင်နှံတို့နှစ်ဦး ဈေးသွားဝယ်ပြီး ဆိုင်ကယ်နှင့် ပြန်လာရာတွင်ကားတိုက်ခံထိ၍ အမှုဖြစ်သောနေရာတွင် နှစ်ယောက်စလုံးသေဆုံးသွားကြောင်း သူဌေးမထံ ဖုန်းက်မးမြန်းချက်အရ သိရပါသည် ဖြစ်စဉ်မှာ ကားမောင်းလာသူ ထိုင်းအမျိုးသမီးသည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် ရန်ဖြစ်ပြီး ဒေါသကြီးစွာဖြင့် ကားအရှိန်ပြင်းစွာ ညာဖက်ခြမ်း လမ်းကျော်မှားမောင်းခြင်းကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပြပါသည်။ သေဆုံးသူ ဇနီးမောင်နှံတို့ နှစ်ဦးသည်အလွန်ပင် စိတ်သဘောထားကောင်းကြောင်းနောက်ထပ် ဒီလိုစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူမျိုးရှာမတွေ့နိုင်တော့ကြောင်း
Unicode 30-3-2021မျက်မမြင်ညီအကို ၄ယောက်ရှိတယ့် မိသားစုအိမ်ကလေး ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကျုံမငေးမြို့ရှိ မျက်မမြင်ညီအကို ၄ယောက်ရှိတယ့် မိသားစုလေးအတွက် ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှမြေကွက် လျှောက်ပေးပြီး အိမ်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ အိမ်လေးကတော့ ပုံထဲကအတိုင်း ဆောက်လုပ်ပြီးပါပြီ။ သားသမီး၅ယောက်မှာ ၄ယောက်က မျက်မမြင်ဖြစ်နေပြီးအိမ်ငှားနေရတာပါ။ အခုတော့ အလှူရှင်များရဲ့ လှူဒါန်းပေးမှုကြောင့် သူတို့မိသားစုလေး အိမ်ပိုင်လေးရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ သူတို့မိသားစုလေးရဲ့ အိမ်ကလေးအတွက် ရေတွင်းကအစ အိမ်သာလေးအပါအဝင် အခြားလိုအပ်တာလေးတွေလည်း
“လုယက်သူနှစ်ဦးကို ခုခံကာကွယ်ခဲ့တဲ့ ကိုမျိုးသက်လွင်ကို ကျပ်(၂၁၅) သိန်း တန်ဖိုးရှိ တိုက်ခန်းချီးမြှင့်”
May Thadin | January 2, 2022
Unicode “လုယက်သူနှစ်ဦးကို ခုခံကာကွယ်ခဲ့တဲ့ ကိုမျိုးသက်လွင်ကို ကျပ်(၂၁၅) သိန်း တန်ဖိုးရှိ တိုက်ခန်းချီးမြှင့်” ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ လုယက်သူနှစ်ဦးကို ခုခံကာကွယ်ရင်း အကျဉ်းထောင်မှာ အမှုရင်ဆိုင်ချိန် ၁ နှစ်နဲ့ ၈ လနီးပါး အကြာမှာ ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ FAME ဝန်ထမ်းဖြစ်သူ မောင်မျိုးသက်လွင်၏ရဲစွမ်းသတ္တိရှိမှုအား ချီးမြှင့်တဲ့အနေနဲ့ FAMEမှ တိုက်ခန်းအသစ်တစ်ခုကို
နှစ်သစ်ကူးည (၁၂) နာရီတိတိမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ အံ့သြယ်ဖွယ်ရာဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို မျှဝေပေးလာတဲ့ ထိုက်ထိုက်အောင်
May Thadin | January 1, 2022
Unicode နှစ်သစ်ကူးည (၁၂) နာရီတိတိမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ အံ့သြယ်ဖွယ်ရာဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို မျှဝေပေးလာတဲ့ ထိုက်ထိုက်အောင် Melody World သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ ထိုက်ထိုက်အောင်ကတော့ လက်ရှိမှာလည်း သူမဝါသနာပါရာ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုလျှောက်လှမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုက်ထိုက်အောင်က ဒီကနေ့မှာတော့ နှစ်သစ်ကူးည (၁၂) နာရီတိတိမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ အံ့သြယ်ဖွယ်ရာဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ပရိသတ်တွေလည်း ဖူးမျှော်နိုင်ဖို့ အခုလိုပဲမျှဝေပေးလာတာကို
Taxi စီးနေရင်းနဲ့ ကားမောင်းတဲ့ အဘဆီကို ဖုန်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာလို့ စမ်စုမိလိုက်တဲ့အခါ
May Thadin | December 31, 2021
Unicode Taxi စီးနေရင်းနဲ့ ကားမောင်းတဲ့ အဘဆီကို ဖုန်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာလို့ စမ်စုမိလိုက်တဲ့အခါ အလုပ်သွားဖို့ taxi တစ်စီးတားလိုက်မိသောအခါ taxi မောင်းတဲ့အဘရဲ့အဖြစ်က ရင်ထဲမကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အလုပ်သွားဖို့အိမ်ကအထွက် taxi တစ်စီးတားလိုက်မိတယ် အသက်အရွယ်ကလဲ ကြီးနေတာကြောင့် ဈေးမဆစ်တော့ဘဲ အဘပြောတဲ့ဈေးနဲ့ဘဲ စီးလိုက်တယ်။ Taxi စီးနေရင်းနဲ့ အဘဆီကို ဖုန်းတခုဝင်လာတယ် ဆေးရုံတင်ထားရတဲ့ သူ့မိန်းမကို
သေကွဲကွဲသွားခဲ့တာ (၁၀)လပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အမြွှာညီငယ်လေး ညီညီအောင်ထက်နိုင်ကို သတိရကြောင်းပြောလာတဲ့ ကိုကိုအောင်ထက်နိုင်
May Thadin | December 29, 2021
Unicode သေကွဲကွဲသွားခဲ့တာ (၁၀)လပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အမြွှာညီငယ်လေး ညီညီအောင်ထက်နိုင်ကို သတိရကြောင်းပြောလာတဲ့ ကိုကိုအောင်ထက်နိုင် နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ စစ်အာဏာရှင်တစ်သိုက်ကြောင့် အသေးပေးခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်း ညီညီအောင်ထက်နိုင်ကို ပရိသတ်ကြီး ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ အောက်မေ့သတိရနေကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ညီညီအောင်ထက်နိုင်ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း သူ့ရဲ့အမြွှာအစ်ကိုဖြစ်သူ ကိုကိုအောင်ထက်နိုင်ဟာ ကျဆုံးသွားတဲ့ညီဖြစ်သူအတွက် ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပေးနေသလို တော်လှန်ရေးမှာလည်း ဆက်လက်ပါဝင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ (၂၉) ရက်နေ့မှာတော့ ညီညီအောင်ထက်နိုင် ကျဆုံးသွားတာ (၁၀)
ညဖက် ပုရိတ်ရွတ်တာ နားညီးလို့ဆိုပြီး ဘေးအိမ်ကလင်မယားရိုက်တာခံရတဲ့ အဖွား ….
May Thadin | December 27, 2021
Unicode ညဖက် ပုရိတ်ရွတ်တာ နားညီးလို့ဆိုပြီးဘေးအိမ်ကလင်မယားရိုက်တာခံရတဲ့ အဖွား အသက် ၁၀၀ နှစ်ပြည့်ခါနီးအဖွား။ ညဖက်ပုရိတ်ရွတ်တာ နားညီးလို့ဆိုပြီး ဘေးအိမ်က အရက်သောက်နေသူကမူးပြီးဆဲတယ်။ ပြန်ပြောတော့ မိန်းမဖြစ်သူက တုတ်နဲ့ရိုက်တယ် ခေတ်ကာလ အခြေအနေကိုလဲဘာမှမသိတော့တဲ့အဖွားကြီးဆိုတော့ ရဲစခန်းတိုင်ရုံကလဲဲပီး ဘာမှမတတ်နိုင် ပြီးတော့ တရားခံက ၂ လုံးရောင်းသူဆိုတော့ ရဲနဲ့ အပေးအယူရှိတော့ ဘာမှ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိတဲ့အဖွါးကြီးမို့ သာ